Qorshe Burburin ah oo ku Aadan Beelaha Absame, oo ay Wadaan Jwxo-shiil iyo Dawlado Shisheeye – Rasaasa News
Jun 1, 2010 oo ay Wadaan Jwxo-shiil iyo Dawlado Shisheeye, Qorshe Burburin ah oo ku Aadan Beelaha Absame
Dawlada Masar oo Isukeentay Al-shabaab iyo Jwxo-shiil, oo ay kaga jawaabayso xurgufta siyaasadeed ee biyaha Nile, iyo iyada oo uu socdo qorshe Shirqool ah oo lala maagan yahay in lagu xagal daaciyo dadaalka uu wado Profesor Gaandi sidii uu uga saari lahaa ururka Al-shabaab Gabalada Jubooyinka.
Kooxda Jwxo-shiil iyo koox odayaal sheegtay oo isaga gacan yare u ahaa mudooyinkanba, ayaa ku hawlan shaqo hawleed ay u soo dhiibtay dawlada Eritrea, sidii ay uga hirgalin lahayeen wadamada Yurub iyo geeska Africa iyaga oo marin ka dhiganaya gabalada Jubooyinka.
Qorshayaashan oo si xawli ah ku socda, ayaa waxay bulsho waynta Absame aad u layaaban tahay aragtida guracan ee Jwxo-shiil iyo nimanka odayaasha sheegtay ee ka wada abaabulka London si ay ku burburinayaa Jaaliyadaha Jubaland iyo waliba qorshaha Professor Gandhi iyo Sheekh Axmed. Odayaashaas oo qaarkood uu ku magacawday Jwxo-shiil in ay gole dhexe u yihiin sida, Duraan Axmed Xaashi iyo Maxamuud Tarax, waxaa kale oo hawshaa la wada Faarax Daahir Afey.
Waxaa la sheegayaa in ay dhaqaale farabadan ku bixinayso dawlada Eritrea koox sheeganaysa Jubooyinka ahna garabka Ina Cumar Cismaan, si dhibyarna loo dhex galo dadaalkii Gaandi, taas oo looga dan leeyahay in Ethiopia lagu mashquuliyo culayskana laggaga qaado hawlgalada sii afjarmaya ee ay ka wadaan sirdoonka Eritreanku dhulka Somalida ogadeniya. Si ay mar labaad ugu suuro gasho xukuumada Eritrea in ay ciidamadeeda soo galiso dalka Somaliya si weerar wada jir ah ay ugu soo qaadaan Alshabaab iyo Eritrea oo wada socda.
Dalka Masar ayaa isna qorshe u gaar ah wata, waxay Masar ogalaysiisay Maxamed Cumar Cismaan in kooxda Alshabaab ay isticmaasho magaca ONLF marka ay hawlaha ka fulinayaa geeska Afrika, ayna u fudayddiyaan in ay ka hawlgalaan gabalka Ogaden iyagana ay Shabaabku u ogolaadaan in ay dhaawaca keensadaan meelaha ay shabaabku ka taliyaan gudaha Somaliya.
Dawlada Masar arintaa waxay uga danleedahay ayaa la leeyahay waxaa jira khilaaf soo kala dhexgala Masar iyo Ethiopia oo ku saabsan wabiga Nile, waxayna doonaysaa in Ethiopia ayna u suura galin qorshe ay wado oo biyo xidheen ah si ay uga mashquuliso waa say isleedahaye.
Qorsheyaashaas ay wadaan dawladahan shisheeye, ayaa kuligood waxay waxyeelo si gaar ah ugu yihiin bulsho weynta Absame oo iyadu maanta u tafo xaydatay sidii ay nabad ugu maamuli lahayd iyagu dhulka ay degto.
Hadii uu qorshahani u hirgalo dawladahan shisheeye waxaa soo foodsaari doonta bulsha weynta Absame iyo dhamaan geeska Afrika hardan keena burbur iyo dhibaato hadii aan si wada jir ah ah laga hortagin xiligan.